Tamarta loo yaqaan 'Risen Energy' si ay u bixiso 20MW oo ah 500W oo loo yaqaan 'Tokai Engineering' oo fadhigeedu yahay dalka Malaysia, oo mataleysa amarkii ugu horeeyey ee adduunka ee loogu talagalay qaybaha ugu awooda badan.
Risen Energy Co., Ltd. waxay dhowaan qalinka ku duugtay qandaraas wada shaqeyn ah oo lala galayo Shah Alam, shirkadda fadhigeedu yahay Malaysia ee Tokai Engineering (M) Sdn. Bhd. Qandaraaska, shirkadda Shiinaha waxay siineysaa 20MW qalab casri ah PV modules shirkadda Malaysia. Waxay u taagan tahay amarkii ugu horreeyay adduunka ee loogu talagalay qaybaha 500W iyo tusaale kale oo ku saabsan hoggaanka Risen Energy ee xilligii PV 5.0.
Muddo 27 sano ah oo khibrad ah, Tokai waxay noqotay maal-gashan xalka qorraxda la aasaasay iyada oo ay ugu wacan tahay xalalkeeda oo dhammaystiran, la habeeyay oo tayo sare leh. Sida horseed u ah daahfurka qaybaha ugu waxtarka sareeya 500W adduunka, Risen Energy waxay bixin doontaa modules iyadoo la adeegsanayo G12 (210mm) monocrystalline silicon wafer tokai. Module-yada waxay yareyn karaan qiimaha isku dheelitirka (BOS) 9.6% iyo qiimaha lacaleeyay ee tamarta (LCOE) 6%, halka kordhinta wax soo saarka hal khad 30%.
Isagoo ka faalloonaya iskaashiga, Tokai Group CEO Dato 'Ir. Jimmy Lim Lai Ho wuxuu yiri: “Risen Energy waxay hogaamineysaa warshadaha in laqabsado xilligii PV 5.0 iyadoo la adeegsanaayo 500W nooc oo tayo sare leh oo ku saleysan teknoolojiyada goynta ku dhisan. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan la galno wadashaqeyntaan Risen Energy waxaana rajeyneynaa bixinta iyo hirgelinta qeybaha sida ugu dhaqsiyaha badan iyada oo ujeedadu tahay in lagu gaaro qiime jaban oo koronto iyo dakhli heer sare ah oo laga helo korontada la soo saaro. ”
Agaasimaha suuq geynta caalamiga ah ee 'Risen Energy' Leon Chuang ayaa yiri, "Aad ayaan sharaf noogu nahay inaan awoodno inaan Tokai u siino noocyada waxtarka sare leh ee 500W, kuwaas oo leh faa'iidooyin badan. Maaddaama aan nahay shirkaddii ugu horreysay ee adduunka ee 500W modules, waxaan ku kalsoonahay oo karti u leenahay inaan hoggaanka la qabanno xilligii PV 5.0. Waxaan ku sii adkeyn doonnaa habka R&D oo diiradda saaraya qiimo jaban, wax soo saar tayo sare leh iyo sidoo kale xalal daboolaya baahida suuqa. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa inaan la shaqeyno wada-hawlgalayaal badan si aan uga caawino warshadaha PV inay la qabsadaan xilli cusub oo qaybo badan oo wax soo saar badan leh.
Xiriirinta ka socota https://en.risenenergy.com/index.php?c=show&id=576